စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ iPhone Xs ကို စောင့်ဆိုင်း ဝယ်ယူနေကြသူများ / Jeremy Long
By Nigma 21 September 2018
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် Eric Japri ဟာ မနေ့ညက ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ခဲ့ပါဘူး။ Apple Store ရှေ့က အေးစက်မာကြောနေတဲ့ ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ကြောင့် အိပ်မရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone Xs မော်ဒယ်အသစ်ကို ကိုင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး အိပ်မပျော်ခဲ့တာပါ။ တညလုံး ၃ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ခဲ့ရပေမယ့် Eric Japri တယောက် လန်းဆန်းတက်ကြွနေပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့၊ သောကြာနေ့ မနက်စောစောမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ Orchard Road က Apple Store ရှေ့ကို Channel NewsAsia ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ iPhone Xs နဲ့ iPhone Xs Max ကို ဝယ်ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့လူတွေဟာ အယောက် ၈၀၀ ကျော်လောက် ရှိနေပါပြီ။ Apple Store စဖွင့်ဖို့ ၁ နာရီလောက်ပဲ လိုပါတော့တယ်။
Apple Store ရှေ့မှာ တညလုံး မအိပ်မနေ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရပေမယ့် တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ လူအားလုံးနီးပါး တက်ကြွမှုအပြည့်နဲ့ ဖြစ်နေတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတဲ့လူတွေကို တွေ့ရသလို၊ ပိုက်ဆံအုပ်တွေ ထုတ်ရေနေတဲ့လူတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
Mr. Japri ဟာ iPhone အသစ် ဝယ်ဖို့အတွက် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျာကာတာမြို့ကနေ စင်ကာပူအထိ လေယာဉ်နဲ့ လာပြီး ကြာသပတေးည ၁၀ နာရီကတည်းက Apple Store ရှေ့မှာ စောင့်ဆိုင်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ညက အေးတယ်ဗျ။ တညလုံးလည်း ၃ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရသေးတယ်။ စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီး အိပ်မပျော်တာပါ” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လုံး ကျနော် iPhone မကိုင်ဖြစ်ဘဲ တခြားဖုန်းတွေပဲ ကိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခု iPhone ကတော့ ကျနော့်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အတွေ့အကြုံသစ် ဖြစ်လာမှာပါ” လို့ Mr.Japri က ပြောပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ iPhone Xs ကို စောင့်ဆိုင်း ဝယ်ယူနေကြသူများ
စင်ကာပူ Orchard Road မှာ မနေ့ညနေလောက်က လျှပ်စီး တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့ မိုးသည်းသွားတဲ့အတွက် Apple Store ရှေ့ တန်းစီနေကြသူတွေဟာ မိုးဒဏ်လေဒဏ်ကိုလည်း ခါးစည်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ လူတော်တော် များများကတော့ အဆောက်အဦရှေ့ မိုးလွတ်တဲ့နေရာမှာ ထီးတွေ၊ ခြုံထည်တွေနဲ့ ရောထွေးပြွတ်သိပ်ပြီး မိုးခိုခဲ့ကြပါတယ်။
“သုံးရတာ တကယ်တန်မယ့်ဖုန်း ဖြစ်ပါစေလို့ပဲ မျှော်လင့်ရတာပေါ့။ တကယ်လည်း တန်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ထားပါတယ်” လို့ Mr Japri က ရယ်သွမ်းသွေးပြီး ပြောပါတယ်။
Apple Store ရှေ့ တန်းစီနေတဲ့ လူတန်းကြီးထဲမှာ ပထမဆုံးက လူကတော့ အသက် ၂၀ အရွယ် Mr. Le Van Thang ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာသပတေးနေ့ မနက် ၇ နာရီကတည်းက အစောဆုံး ရောက်နေတာ ဖြစ်တာကြောင့် အခုဆိုရင် သူစောင့်နေတာ ၂၄ နာရီတောင် ကျော်သွားပါပြီ။
“iPhone အသစ်တွေ ရတော့မှာဆိုတော့ အရမ်းပျော်နေတာပေါ့။ လုံးဝ ပင်ပန်းတယ်လို့ကို မခံစားရပါဘူး။ အခု ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ လေဆိပ်ကို အပြေးပြန်ပြီး ဗီယက်နမ်အိမ်ကို ပြန်တော့မှာပါ” လို့ Mr. Le Van Thang က ပြောပါတယ်။
ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့၊ မနက် ၈ နာရီထိုးအချိန်မှာတော့ စင်ကာပူ Apple Store က တံခါးတွေကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ iPhone Xs ကို ၁,၆၄၉ စင်ကာပူဒေါ်လာ၊ iPhone Xs Max ကိုတော့ ၁,၇၉၉ စင်ကာပူဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းချလျက် ရှိပါတယ်။ iPhone Xr ကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ရောင်းချသွားမှာပါ။
Topics: iPhone, iPhone XS